तानसेनका घरघरमा २४ सै घण्टा खानेपानी ! - Dainik Nepal
तानसेनका घरघरमा २४ सै घण्टा खानेपानी !
एक वर्षभित्र तानसेनमा कालीगण्डकीको पानी ल्याउने प्रतिबद्धता
–सुशीला रेग्मी २०७५ असार ११ गते १४:५६
रामपुर, पाल्पा, ११ असार । तानसेन नगरपालिकाका जनतालाई यसै वर्ष २४ सै घण्टा घरघरमा खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । तानसेन कालीगण्डकी लिफ्ट खानेपानी योजनाबाट तानसेनका बासिन्दालाई सुविधा उपलब्ध गराइने भएको हो ।
उक्त योजनाबाट अहिलेसम्म पानी तान्नका लागि विद्युत् जडानको काम सकिएको र पानी संकलनका लागि कालीगण्डकीमा इनार निर्माणको काम भइरहेको छ । पानी तान्न विभिन्न पाँचवटा स्थानबाट एक/एक लाख लिटर ट्याकी निर्माण गर्नुपर्नेमा तीनवटा ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । दुईवटा निर्माणको चरणमा रहेको र आठ इन्चको पाइप जडानको काम भइरहेको निर्माण कम्पनीका साइट इन्जिनियर दीपक न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन
रु ४० करोडमा निर्माण भइरहेको तानसेन रानीघाट लिफ्ट खानेपानी योजना संझौता बमोजिम २०७५ मंसिर ७ गतेभित्र सक्नुपर्ने छ । खानेपानी योजनाको काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ ।
विसं २०७५ फागुन चैतभित्र तानसेनका जनतालाई कालीगण्डकीको पानी खुवाउने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनका प्रमुख केशवलाल शाक्यले बताउनुभयो । कालीगण्डकीको पानीले आगामी १५ वर्षका लागि अन्य स्रोत खोज्न नपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कालीगण्डकीको पानी खान पाउने आशामा तानसेनवासीमा खुशियाली छाएको छ । सो कार्यका लागि नयाँधारा जडान गर्न निवेदन दिएको एक हप्तामै उपभोक्ताको घरमा धारा जडान हुने उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । हाल तानसेनमा २० लाख लिटर पानीको आवश्यकता भएकामा दैनिक सात लाख लिटर आपूर्ति हुँदै आएको छ । -रासस
प्रदेश नं ५ : दशैँ तिहारमा सवारी दुर्घटनाबाट ४१ जनाको मृत्यु
१३ वर्षीया बालिका हत्यामा संलग्न अभियुक्त सार्वजनिक
दैलेखमा अरिङ्गालले टोकेर बालकको मृत्यु